China DIN933 vy malefaka sokajy 4.8 Hex bolt mpanamboatra sy mpamatsy | Tianbang Fasteners
Ny halavany dia refesina manomboka amin'ny teboka ipetrahan'ny loha amin'ny tany, hatramin'ny tendron'ny kofehy. Hex, lapoaly, truss, bokotra, cap socket ary borosy loha boribory dia refesina avy eo ambanin'ny lohany ka hatramin'ny faran'ny kofehy. Ny visy lohan'ny loha dia refesina avy eo an-tampon'ny loha ka hatrany amin'ny tendron'ny kofehy.
zavatra Hex bolt
Vokatra lehibe DIN931 DIN933
Surface Plain / Black / Zinc nopetahina / HDG / Dacromet
Malagasy DIN GB ISO ANSI / ASME BS Non fenitra
kilasy 4.8 8.8 10.9 12.9
Akora Q235, Q195,1035,1045,20MnTiB, 35Crmo
Fanamarinana ISO9001, SGS
Fonosana 5kg, 10kg, karbaona / kitapo 25kg + pallet na namboarina.
Manisy seranan-tsambo Seranan-tsambo Tianjin, seranan-tsambo Qingdao, hafa
Fampiharana fasteners fiara, mekanika, fananganana, vovoka, lalamby, fitaovana elektrika ao an-trano sns.
Tsy fenitra OEM dia misy raha manome sary na santionany ianao.
Professional Izahay dia matihanina amin'ny vokatra fastener mihoatra ny 15 taona
Toerana niandohana Yongnian, tananan'i Handan, faritanin'i Hebei, Sina
fanompoana Santionany maimaimpoana
Famokarana Fitaovana-tariby tsy misy fangarony-fanodinana hatsiaka-fitsaboana-test -packing-loading
Ora nanomezana Miorina amin'ny haben'ny filaminana
FITAOVANA Fitsapana henjana, fitsapana herinaratra, fitsapana fiaretana famafazana sira, fitsapana habe mekanika, fanamarinana sns
Dingana fizahana Fanaraha-maso kalitao ho avy → Fanaraha-maso ny kalitaon'ny dingana → Fanaraha-maso kalitao farany → Fanaraha-maso kalitao mialoha ny fandefasana
Torolàlana bebe kokoa momba ny bolt
1) Ahoana ny fandrefesana ny bolt hex?
Ny halavany dia refesina manomboka amin'ny teboka ipetrahan'ny loha amin'ny tany, hatramin'ny tendron'ny kofehy. Hex, lapoaly, truss, bokotra, satroka socket ary borosy loha boribory dia refesina avy eo ambanin'ny loha ka hatramin'ny faran'ny kofehy. Ny visy lohan'ny loha dia refesina avy eo an-tampon'ny loha ka hatrany amin'ny tendron'ny kofehy.
(2) Ampiasaina inona ireo hex bolts?
Hex bolts, na visy kofehy hex, dia kofehy lehibe misy loha enina (hexagonal) ampiasaina hametahana hazo amin'ny hazo, na vy amin'ny hazo.
(3) Ahoana no hanesoranao ny het bolt?
Mampiasà marotoa hametahana ny lakilen'ny hex amin'ny tranga lehibe. Arotsaho menaka vitsivitsy ny rano ao an-tokantrano na atsipazo menaka fanosotra aerosol amin'ny lohan'ny visy izay tsy afaka miaraka amin'ireo fitaovana fanampiny. Manomeza 20 minitra hiasa eo anelanelan'ny kofehy ny diloilo alohan'ny hanandramana esorina.
Fitsapana vokatra sy fonosana
F1: Orinasa mpivarotra ve ianao sa mpanamboatra?
A1: Orinasa izahay.
F2: Azoko atao ve ny mitsidika ny orinasa misy anao?
A2: Ie! Miarahaba antsika hitsidika ny ozininay. Tena tsara izany raha afaka mampahafantatra anay mialoha ianao.
F3: Ny kalitaon'ny vokatrao?
A3: Ny orinasa dia manana famokarana mandroso sy fitaovana fitiliana. Ny vokatra rehetra dia hozahana 100% amin'ny departemantan'ny QC alohan'ny fandefasana azy
F4: Ahoana ny amin'ny vidinao?
A4: vokatra avo lenta miaraka amin'ny vidiny mirary. Azafady mba omeo fanontaniana aho, hasiako vidiny ho anao, indray mandeha.
F5: Afaka manome santionany maimaimpoana ve ianao?
A5: Afaka manome santionany maimaimpoana ho an'ny fastener mahazatra izahay, fa ny mpanjifa kosa dia handoa ny sarany Express.
F6: Inona ny ora fanaterana anao?
A6: Miankina amin'ny habetsany. Hanao ny fandefasana haingana araka izay tratra izahay miaraka amin'ny kalitaon'ny antoka.
F7: Ahoana no tokony hanafarana sy handoavana vola?
A7: Amin'ny alàlan'ny T / T, ho an'ny santionany 100% miaraka amin'ny baiko; ho an'ny famokarana, 30% aloa ho an'ny petra-bola amin'ny T / T alohan'ny famokarana famokarana, ny fandanjana aloany alohan'ny fandefasana.
Teo aloha: DIN 125 Voahosotra vy metaly milina fanosorana nopetahany takelaka
Manaraka: nandrisika 8. DIN934 Hex nut carbon steel black
Hex Hex Bolt
Bolt Coupling Nut, Hex Socket Head Bolt, Sofina voa, Hex Socket Bolt, Fehikibo vatofantsika fototra, Vatofantsika fametahana vy mihantona,